Tonga tao Espana ihany ny Twitter Moments | Vaovao momba ny gadget
Tonga tao Espana ihany ny Twitter Moments
Raha mpampiasa ianao Twitter azonao antoka fa ho fantatrao ny momba ilay fiasa Moments o fotoana Satria efa nisy hatramin'ny faran'ny herintaona farany teo, dia tamin'ny fomba ofisialy izao no nanambaran'ny Twitter fa manomboka izao dia rehefa afaka mankafy ireo fampiasa ireo ny mpampiasa ny sehatra any Espana, raha tsy fantatrao izay dia, manome anao andiany famintinana ireo vaovao manandanja indrindra amin'izao fotoana izao.
Handeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa, ao amin'ny Twitter Moments the bitsika mahaliana kokoa amin'ny lohahevitra iray. Araka ny efa nampoizina, ireo lohahevitra ireo dia afaka miovaova be, manomboka amin'ny vaovao navoakan'ny haino aman-jery ankapobeny ka hatramin'ny resaka mandeha ankehitriny. Amin'ity fotoana ity dia azo antoka fa voamarikao ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ny fampandehanana ankehitriny sy taloha, satria teo aloha dia azo atao ny mamorona Moments na dia tsy nisy ekipa tompon'andraikitra amin'ny fisafidianana ireo forona niavaka indrindra tamin'ny androny.
Twitter Moments dia efa misy amin'ny fomba ofisialy any Espana izao.
Io no fahasamihafana lehibe hatrizay, satria ny departemanta marketing Twitter dia nanambara tamin'ny alàlan'ny fanambarana ampahibemaso, izao dia manana ny orinasa ekipa miandraikitra ny fisafidianana ireo fotoana mendrika hiseho amin'ny pejin'ny tambajotra sosialy malaza. Ity pejy ity dia hozaraina ho takelaka maromaro toy ny 'Hoy'izay ahitantsika ny mampiavaka ny andro na ny an'ny, ohatra,'fanatanjahan-tena'miaraka amin'ny atiny mifandray amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena.
Ho an'ny loharanom-pahalalanaFarafaharatsiny farafaharatsiny, angona avy amin'ny haino aman-jery malaza toa an'i El Mundo, El País, Antena 3, La Sexta ary na ny kaonty toa ny ekipa samihafa toa ny Sevilla FC na Real Madrid FC aza hangonina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Tonga tao Espana ihany ny Twitter Moments
Vespa dia mampiseho amintsika ny sarety miavaka mizaka tena afaka mitondra ny entantsika
Ny kinova Chrome manaraka ho an'ny birao dia hametra ny fampiasana plugins